E m0t i o n: Movie Maker ကျေးဇူး
9 comments: to “ Movie Maker ကျေးဇူး ”
သိုးလေးရေ လာဖတ်သွားတယ်ကွ။ ကျွန်တော်လည်း Movie Maker တစ်ခါစမ်းဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံတော့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ပုံတွေပဲ ကိုယ်လုပ်တာကိုး။ :D ပြီးတော့ လိုက်ပြတော့ ဘယ်သူမှလည်း မကြည့်ဘူး။ ဘယ်ကြည့်မှာလည်း ကြည့်ပြီးရင် အစားပျက် အသောက်ပျက်ဖြစ်ဦးမယ်တဲ့။ ဒီရုပ်ကို အပြင်မှာ မြင်ရတာနဲ့တင် တော်ပါပြီဆိုပဲ။ အဲကတည်းက ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
Flash ထဲမှာ virus ပါတာတော့ မဆန်းတော့ပါဘူး။ အဲဒီ အစ်မကြီးက အဲဒီလိုတော့ မပြောသင့်ဘူးလေနော့။
အေးချမ်းသူ= သိုးကလေး=နှင်းသဇင်လား။ ဖြေပေးပါဦးနော်။
အခုလိုပဲပို့ စ်လေးတွေမှန်မှန်ရေးသွားတာတွေ့ ရတော့
အမတော့အားလိုက်မအားလိုက်နဲ့ မို့ ဘလော့ကိုပစ်ထားလိုက်ကော။
သိုးလေးရေ..မမလေးဆိုသိတောင်မသိဘူး...။ ခုမှသိတယ်..။ သင်ပေးဦးလေ...။
my sister, your post is innocent and lovely. please go on, your honest and simple style of blogging is very sweet.
ကိုဇီးကွက်... သိုးလေးက အေးချမ်းသူပါပဲ။ နှင်းသဇင်တော့ မဟုတ်ဘူး။
Thanks for your site. I went there.
>>angel..မရဲ့ကောင်းကင်ကြီးကို အရမ်းသဘောကျတာ။ ပစ်မထားပါနဲ့...
မမလေး... သိုးလေးက မတောက်တခေါက်ပဲ တတ်တာ။ သင်ပေးဆိုရင်တော့ သင်ပေးမယ်။ မေးလ် ပြောပြ။
အစ်ကိုဖီးနစ်... မမြင်တာ ကြာပေါ့၊ ခုတော့ အလန်ဖြစ်သွားပြီပဲ (ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး စတာ၊ ချိတ်ချိုးနဲ့)။ :)
စမ်းကြည့်ဦးမယ် ဝေး တခါမှ သုံးဖူးဘူး